एमाले परित्याग गर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष भन्छन्,‘एमालेमा व्यक्तिवादी सोच खतरनाक छ’ ! | Diyopost - ओझेलको खबर एमाले परित्याग गर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष भन्छन्,‘एमालेमा व्यक्तिवादी सोच खतरनाक छ’ ! | Diyopost - ओझेलको खबर
एमाले परित्याग गर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष भन्छन्,‘एमालेमा व्यक्तिवादी सोच खतरनाक छ’ !
दियो पोस्ट बुधबार, फाल्गुण २५, २०७८ | ८:४३:५८
काठमाडौं । नेकपा एमालेको तर्फबाट सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित केदार क्षेत्री नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरेका छन् । मंगलबार दलबलसहित कांग्रेस प्रवेश गरेका उनी पुराना एमाले नेता हुन् । सरकारले स्थानिय तहको निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ । स्थानिय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको ६ महिना अघि जनप्रतिनिधिले दल बदल्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको कारण आफूले बदलेको र नेकपा एमालेमा हुर्कंदै गरेको व्यक्तिवादी प्रवृत्तिका कारण आफूले एमाले परित्याग गरेको उनको दाबी छ ।
प्रस्तुत छ क्षेत्रीसँग गरिएको छोटो कुराकानी
– म नेकपा एमालेबाट ५ वर्ष अगाडी बलेफी गाउँपालिकाको अध्यक्षको उम्मेदवार बनेर यो जिम्मेवारी पाएँ । यसमा एमालेलाई मन पराउने र मायाँ गर्ने कार्यकर्ता र नेताहरुको योगदान थियो । यसमा दुई मत छैन । ५ वर्षसम्म पदमा रहेर जनतालाई बलियो बनाउने र पार्टी सुधार गर्ने मेरो कर्तव्य थियो । त्यो कर्तव्य करिब पुरा भयो । खास गरी नेकपा एमालेमा हुर्कदै गएको गलत संस्कृति, परम्परा, व्यक्तिवादी सोच, नातावाद खतरनाक बन्दैछ । एमालेको कुनैपनि कुनै पनि राष्ट्रिय विषयमा स्पष्ट धारणा रहेन । हरेक विषयलाई लेनादेनाको विषय बनाइने कुराले म केही समयदेखि चिन्तित थिएँ । एकातिर यो अवधिलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुपर्ने दायीत्व पनि छ ।
करिब करिब त्यो दायीत्व पुरा गरिसकेपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पनि निर्वाचन हुनुभन्दा ६ महिना अगाडी जननिर्वाचित पदाधिकारीले पनि पार्टी छाड्ने अवसर पाउँछ । मैले आगामी दिनमा नेकपा एमालेमा रहेर सिन्धुपाल्चोक र बलेफी गाउँको विकासमा योगदान दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा कुठाराघात भयो । मेरै पार्टी र मेरै प्रदेशको माननीय मन्त्री हुँदखेरीपनि बलेफी प्रदेश सरकारबाट धेरै उपेक्षित बन्यो । त्यो सबैभन्दा पीडादायक क्षणको रुपमा लिएको छु । यसो भनिरहँदा म निराश छैन ।
सिन्धुपाल्चोकको १२ वटा स्थानिय तहको विकासलाई दाँज्ने हो भने बलेफी कसैभन्दा कम त छैन । यतिले मात्रै सन्तोष गर्ने ठाउँ पक्कैपनि छैन । तर, खासगरि बलेफीको कुरा गर्नुहुन्छ भने झण्डै ७५ प्रतिशत मत पाउने सांसद मन्त्रीले समेत बलेफीलाई उपेक्षित गरेको देख्दाखेरी म चिन्तित थिएँ । पार्टीको भूमिका प्रति पनि म चिन्तित थिएँ । नेकपा एमाले बनाउन मेरो पनि योगदान छ । म ५ कक्षामा पढ्दाखेरि अनेरास्ववियुमा संगठित हुँदै ४१ सम्म यो पार्टीको विभिन्न जिम्मेवारीमा थिएँ ।
मैले ५ वर्षे अवधिमा केही चिजहरुमा उल्लेखनिय काम भएका छन् ।
राजनीतिक मुद्दामा विमती
मूलत त राजतीकि मुद्दा र विचारमा पनि विमती हो । नेकपा एमाले र खासगरि कम्युनिस्ट पार्टीहरुले कुनै पनि राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा स्पष्ट धारणा राख्न नसक्ने रहेछन् । एमसीसीकै विषय हेरौँ । एमसीसीलाई टेबुल गर्ने नेकपा एमाले हिजो मेरो पार्टी हो । एमसीसी पास गर्ने बेलामा एमालेको कुनै भूमिका रहेन । न त यो गलत छ भनेर उसले संसदमा आफ्नो मत जाहेर गर्यो । न त हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुँदा निर्णायार्थ पेश भएको हुनाले यो जायज छ । हामी पास गर्छौं भन्न सकेन ।
यस्तो एउटा राष्ट्रिय विषयलाई समेत दिग्भ्रमित पार्ने, पक्षमा हो की विपक्षमा हो की छुट्टिन सकेन । पक्षमा हुँदा हुँदै सर्तहरु राख्ने । आफ्नै सहकर्मी, खासगरी सभामुखलाई हटाउनुपर्ने सर्त राख्ने, माधव नेपाललाई हटाउनुपर्ने सर्त राख्ने एउटा कुरा यो पनि हो । अर्को नेपालको ईतिहासमा पहिलो पटक बहुदलपछि दुई तिहाईको सरकार, सात मध्ये ६ प्रदेश सरकारको नेतृत्व भएको अवस्थामा पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर देशको नेतृत्व गर्नुपर्ने बेलामा जनताको अपार मायाँलाई बेवास्ता गरेर खाली खुर्सीको लेनादेनामा क्षणिक स्वार्थहरुमा लागेर पार्टीलाई ध्वस्त गर्ने र जनताको विकास प्रतिको चाहनालाई ध्वस्त पार्ने काम भयो । अब मैले के देखेँ भने कम्युनिस्टहरुको उधोगति शुरु भयो ।
बुधबार, फाल्गुण २५, २०७८ | ८:४३:५८